दुखद खबर: यीनै हुन शिक्षकको कु.टाइबाट मृ*त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी ! -
Home News दुखद खबर: यीनै हुन शिक्षकको कु.टाइबाट मृ*त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी...
दुखद खबर: यीनै हुन शिक्षकको कु.टाइबाट मृ*त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी !
झापाको एक विद्यालयमा अध्ययनरत बालकको मृ.त्यु भएपछि विद्यालय वि.वादमा तानिएको छ। शिक्षकको कु.टाइबाट ती बालकको मृ.त्यु भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।
कनकाई नगरपालिका – ६ स्थित चम्पापुर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशीको बिहीबार उपचारका क्रममा मृ.त्यु भएको हो। उनी कक्षा ४ मा अध्ययनरत थिए।
राजवंशीको मृ.त्युपछि विद्यालयको कार्यालय सहायक ९खरिदार० पदमा कार्यरत रविन मगरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मगरले कक्षा ४ मा पठनपाठन गराउने क्रममा सोधेको कुरा नजानेको भन्दै गत माघ१८ गते राजवंशीलाई कुटपिट गरेका थिए।
शिक्षकको कु.टाइबाट विद्यार्थीको कान सुन्निएपछि उपचारका लागि तत्काल स्थानीय कामेश मेडिकल लगिएको थियो। मेडिकलमा सामान्य उपचारपछि उनलाई घर पठाइएको थियो। घर पुगेपछि पनि बालकले आफूलाई शिक्षकले कु.टेको कुरा अभिभावकसँग बताएनन्। तर, घरमा कान झनै सुन्निन थालेपछि आफन्तले बारुलाले टो.केको होला भनेर बालकका साथीसँग सोधपुछ गरेका थिए। त्यसपछि राजवंशीका साथीले उनलाई शिक्षकले कान मोलेर यस्तो भएको बताएका थिए।
बालकको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिँदै गएपछि थप उपचारका लागि तत्काल बिर्ता सिटी हस्पिटल लगिएको थियो। तर, त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि बी एन्ड सी पुर्‍याइएको जानकारी विद्यालयका एक शिक्षकले जानकारी दिए। त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएको भन्दै बिहीबार विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज पठाइएको थियो। तर, अस्पताल पुर्‍याएर उपचार सुरु गरेलगत्तै विद्यार्थीको मृ.त्यु भयो
Previous articleसिमानामा डेडिकेटेड फो’र्स यसरि राखिदै,नेपाली से’ना र स’शस्त्र, कसले पाउला
Next articleExclusive भखरै एकै घरको ३ जना बौलायो भाइरल बन झा*क्री ले भु*त लाई यस्तो चुनाउती दिदै हेर्नुस्